शनिबार सार्वजनिक हुँदै थारु गीत 'चोटी वाली छौरी', नयाँ भूमिकामा देखिए युवराज ! - Nepal Post Daily
शनिबार सार्वजनिक हुँदै थारु गीत ‘चोटी वाली छौरी’, नयाँ भूमिकामा देखिए युवराज !
बीरगन्ज, १४ भदौ । थारु गीत चोटी वाली छौरीको भिडियो सार्वजनिक हुनका लागि तयार भएको छ । गत साता भिडियोको छायांकन सम्पन्न भई सम्पादनमा गएको भिडियो यहि शनिबार सार्वजनिक हुन लागेको हो ।
थारु आईटम गीत भनिएको यस गीतलाई प्रमोद चौधरीले शब्द दिएका छन् भने गीतलाई गणेश चौधरी र भानुले संगीतबद्ध गरेका छन् । गीतमा भानु थारु र सोनु कुश्मीको स्वर छ भने गीतमा हालिएको र्यापलाई राज कुश्मीले गाएका छन् । यस गीतको भिडियोलाई सावन शर्माले निर्देशन गरेका छन् भने क्यामेरा विकास गुरुङ्गले सम्हालेका छन् ।
भिडियोको प्रोडक्शन डिजाईनरको भूमिकामा युवराज केशरी देखिएका छन् । यसअघि नेपाली कथानक चलचित्र तथा दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा देखा परेका उनी यस भिडियोमा पर्दा पछाडीका नायक बनेका छन् । उनले भिडियो छायांकन गरिएको सेट डिजाईन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा लामो समयसम्मको अनुभव बटुलेका उनी बेलाबेलामा निर्देशकको भूमिकमा पनि देखिने गरेका छन् ।
Previous articleसवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा पुनः सुचारु हुँदै
Next articleपृथ्वीराजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा